आर्थिक Archives - Page2of3- Eall Nepal
काठमाडौं । आईतबारको तुलनामा सोमबार आज सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुन तोलामा १ सय रुपैयाँ घटेको हो । आज सुन तोलाको ५८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको ...
तपाई राजधानीमा घडेरी किन्दै हुनुहुन्छ ? राम्रो घडेरी नपाएर किन्न पाउनु भएको छैन ? घडेरी किन्न दलालको चंगुलमा फस्नु भएको छ ? अब चिन्ता नलिनुस मनोहरा जग्गा एकिकरण आयोजनाले न्युनतम १६ लाखदेखि २४ लाख रुपैयाँमा ...
नेपाली बजारमा सुनको भाउ उकालो लाग्दै : कति छ त तोलाको
फेरि बढ्यो सुनको भाउ, तोलामा १ सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको भाउ काठमाडौँ, २४ जेठ । बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा १ सय रुपैयाँले बढेको छ । बुधबार ५८ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन बिहीबार ...
यसपालीको बजेट पछीको बढेको छ बजाज कम्पनीका बाईकमा के कति फेरबदल छ हेर्नुहोस पछील्लो मूल्य सूची सहित
ग्यास सिलिन्डरमा आधीजती त पानीनै हालेर बिक्रि गर्छन् ग्यास व्यावसायी
हरकसिहं धामी, कञ्चनपुर । लिटरका लिटर पानी भरेर बेचिन्छ ग्यासका सिलीन्डर, कञ्चनपुर जिल्लाको भिनपा ४ स्थित महेन्दनगरको गल्ली नं. ३ मा रहेको ए वन बरुण नास्तातथा मिष्ठान होटलको प्रयोगमा रहेको भैरी ग्यासको सिलेण्डर भित्र ४ ...
नयाँ मोडेलका बाईक किन्ने सोचमा हो भने हेर्नुहोस कुन बाईक कति पैसामा पाईन्छ, हेर्नुहोस पछील्लो दररेट सहित
नेपालमा करिब दुई दशकयता मोटरसाइकल तथा स्कुटर चढ्नेहरुको संख्या बढ्दो छ। काठमाडौँ लगायत नेपालका विभिन्न ठूला तथा व्यस्त शहरहरुमा मोटरसाइकल दैनिक आवश्यकताको साधन बनिसकेको कारण मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो रुपमा रहेको छ। कामगर्ने कर्मचारीहरुदेखि लिएर ...
मनपरी भाडा असुल्ने १५० बढी ट्याक्सीलाई कारवाहीमा
सरकारले ट्याक्सीमा जडित मिटरमा कैफियत भेटिएका १ सय ५० वटा ट्याक्सीलाई कारबाही गरेको छ। बितेको दुई महिनामा ती ट्याक्सीबाट जरीवानास्वरूप १ लाख ५० हजार रुपियाँ राजस्व संकलन भएको गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले जनाएको छ। ...
बेरोजगार युवाहरुका लागि खुसीको खबरः महिनामा पचास हजार बढी कमाई हुने केही ब्यावसाय, केवल १-२ लाखको लगानीमात्र
मानिस अर्काकोमा जागिर खानुभन्दा आफैं केही गर्दा रमाउँछ । नेपालमा पछिल्लो समय विदेश जानुु वा अर्काकोमा जागिर खानुभन्दा आफैं केही गर्ने क्रम बढेर गएको छ । यदि तपाईं पनि आफैं केही गर्न खोजिरहनुभएको छ भने ...
नयाँ घर बनाउन खोज्दै हो भने नेपाली बजार बाट आयो दुखद खबर, १५ दिनमै आकाशियो सिमेन्ट,छडको मूल्य
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले १५ दिनकै अवधिमा पाँच पटकसम्म मूल्यवृद्धि गरेको पाइएको छ । मूल्यवृद्धिसँगै नयाँ घर बनाउने तयारीमा रहेकाहरु मारमा परेका छन् । घर निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, छड लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य हटात ...
सुनको भाउ बढ्यौ, यस्तो छ आजको कारोबार
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ५७ हजार पुगेको छ । तेजावी सुनको मूल्य आज तोलामा ५६ हजार ७ सय रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । ३ दिन बिहीबार, शुक्रबार ...